Puntland News – Page 691 – Somali Latest News
Yaxaas dhererkiisu gaarayo shan mitir oo lagu dilay Saakow- Sawirro
Boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay Fagaare ku yaala degmada Saakow oo lagu soo bandhigay Xaxaas shan mitir ah kaasi oo lagu dilay Beer u dhaw wabiga Saakow. Balaca Yaxaaska waa hal mitir waxaana lagu dhuftay shan xabad oo…
April 5, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
Iceland’s Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson is to resign, his party said on Tuesday, becoming the first casualty of leaked documents from a Panamanian law firm which have shone a spotlight on the finances of an array of politicians and…
April 5, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 3
Mogadishu, 4 April 2016 – The international community welcomed the decision of the Puntland Government to participate fully in the electoral process that will choose a new federal parliament later this year. Yesterday’s agreement between the Federal Government of Somalia…
April 5, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 2
Daawo: Madaxwaynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli oo kala hadley Shacabka Pl PUNTLANDTV
Daawo: Shacabka Garowe oo si aad ugasoo horjeestay heshiiska lagu saxiisay 4.5
Madaxweynaha Puntland oo jeediyay khudbad oo shacabka Puntland uga qancinayo qaadashadii 4.5
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta oo ay taariikhdu tahay 05, April 2016 waxa uu si rasmi ah u booqday xarunta dhexe ee warbaahinta Dawladda Puntland ay ku leedahay Caasimadda Garoowe, halkaas oo uu si toos…
April 5, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 1
Daadad 15 Qof ku Dilay Magaalada Jigjiga
Ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay, islamarkaana 100 qof ayaa cusbitaallada la dhigay kadib daadad xooggan oo saameeyey magaalada Jigjiga ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Wararka qaar ayaa dhimashada intaasi ka badinaya. Daadadka ayaa ka dhashay kadib markii xilli habeenimo…
Xasan Sheekh waa hir-galiyay 4.5,ma ku guulaysan doona wajigii labaad ee ahaa jamhuuriyadda dimiquraadiga Soomaaliya! W/Q Yuusuf Cumar
Waxbadan oo shaki iyo cabsi ah ayaan ka qabnaa aayaha dalkeena soomaaliya.marar badan wanaag ma filano ayadoo ay noogu wacan tahay arimhan iyo kuwa kalaba sida. * Dagaalada sokeeye oo nagu daba dheeraaday *Xali looni darada iyo dawlad la aanta…
Madaxweyne Cabdiweli iyo Shacabka Puntland Yaa u Garnaqi doona??
Sida aan og soonahay puntland waxay diiday qaadashada 4.5 markii dowladda soomaliya iyo maamulada dalka ka jira ay isgu raceen in la qaato nidaamka awood qeybsiga 4.5 ee ay soomalia ku soo caana maashay laga soo bilaabo 2000 ilaa 2016.…
Dawawo: bilicda xeebta magaalada ganacisga ee Bosaso
Sawir qaade madax-banaan oo lagu magacaanbo Maxamed Faarax Baarud ayaa Puntlandnews.net soo gaarsiiyay sawirro dabiici ah oo lagasoo qaadatay magaalada Bosaso una badnaa dhinaca xeebta. Sawiraddaan ayaa muujinaya quruxda dhulkeena, isagoo dad badan ku abuuraya rajo ah in Soomaaliya mustaqbalka…
Duqeymo lagu dilay Xubno Ka Tirsan kooxda Al-Shabaab
Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in labo ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xooggan oo xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaanka Beerxaani. Dagaalka ayaa…
Dr. Faroole.” Waxaan aad uga xumahay inaanan waxba ka qaban karin heshiiska faasidka ah ay Puntland saxiixday
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay heshiiskii xalay magaalada Garowe ku kala saxiixdeen dowladda federalka iyo Puntland, heshiiskaas oo dhigayay in Puntland ogolaatay nimaanki 4.5. Dr. Cabdiraxman Faroole oo kamid…
Sharoobada 4.5: Sawirka maanta iyo madaxweyne Gaas
← Previous 1 … 690 691 692 … 697 Next →